Odayaasha gobolka Hiiraan oo u kala qeybsamay laba qeyb iyo jawaab culus oo ay siiyeen Yuusuf Dabageed – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Odayaasha gobolka Hiiraan oo u kala qeybsamay laba qeyb iyo jawaab culus oo ay siiyeen Yuusuf Dabageed
Wararka ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka gobolkaasi ay weli ku adkeysanayaan in gobolka Hiiraan ay labo u qeybiyaan.
Odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xafladda caleemo saarka ee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo maalinta berri ah ka dhici doonta magaalada B/weyne kadib ay bilaabi doonaan qorshaha ah, in gobolka Hiiraan ay laba qeyb u kala qeybiyaan.
Dacar Xirsi oo ka mid ah Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qorshaha ay ku doonayaan in gobolka Hiiraan labo ay ka dhigaan uu yahay sidiisi hore islamarkaana aanay wax isbadel ah ka jirin.
Wuxuu sidoo kale ka jawaabay hadal maalintii shalay kasoo yeeray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed), kaas oo ahaa inaan la sameyn karin maamul ka madax banaan midka dowladda ay ku og tahay gobolka Hiiraan.
“Qorshaheena waa sidiisa, waxna iskama bedelin, gudoomiyaha faraha lama soo gali karo go’aanada ay gaareen Odayaasha dhaqanka reer Hiiraan, anaga gobolka labo ayaan u qeybinaynaa waana labo gobol.” Sidaas waxaa yiri Nabadoon Dacar Xirsi.
Dhinaca kale, kulan ay horay odayaasha dhaqanka reer Hiiraan ku yeesheen magaalada B/weyne ee xaruta gobolka Hiiraan ayay ku sheegeen inay sameysanayaan maamul ka madax banaan dowladda federaalka Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, Odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa horay shuruud ugu xiray wafdi kala duwan oo gaaray magaaladaasi, in dhismaha maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe ay uga qeyb-galayaan, waxay ku dhici kartaa oo kaliya in gobolka Hiiraan oo labo loo qeybiyay.
Ilaa iyo haatan lama oga sida odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ay ugu suurta-geli doonto dhismaha maamul ka madax banaan midka ay waddo dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana la arki doonnaa kadib markii uusoo gaba-gaboobo xafladda caleema saarka ee Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo maalinta berri ah ka dhici doonta magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.